Hanti dhowrka oo Ra'isul Wasaare Kheyre ku eedeeyay Musuq-Maasuq | KEYDMEDIA ONLINE
Xafiiska Hanti dhowrka oo wada Qorshe ka dhan ah Kheyre
Xafiiska Hanti dhowrka guud ee Dowladda Soomaaliya ayaa wada qorshe ka dhan ah Ra'iisulwasaarihii hore ee Xukuumaadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre, sida ay ogaatay Keydmedia Online.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xafiiska Hanti dhowrka guud ee Dowladda Soomaaliya ayaa daabacay warbixin la xiriirta baarista bilow u aha in Ra'iisulwasaarihii hore ee dowladda Soomaaliya ee la ceeriyay bartamihii sanadkan Xasan Cali Kheyre lagu soo oog musuq maasuq.
Sida ay KEYDMEDIA ONLINE horay u daabacday qorshahan waxaa wada Madaxweyne Farmaajo oo doonaya in uu kala reebo ragga Musharraiinta ah ee kula loolamaya kursiga madaxtinimada Soomaaliya afarta sano ee soo socota.
Dacwad ayaa loo qorsheenayaa in loo gudbiyo Maxkamadda Sare, inta ay dacwadaasi socoto Xasan Cali Khayre kama soo qeyb gali doono tartanka, ilaa iyo inta kiiskiisa uu ka dhammaanayo, qorshahan oo u muuqda mid aan mira dhali doonin ayey kooxda Ololaha Farmaajo iska dhaadhiciyeen in mid kamida shakhsiyaadka laga yaabo in ay kusoo bixi karo loollan adagna uu galin karo madaxweyne Farmaajo ay dhabar-jab ku tahay.
Keydmedia Online ayaa saddex billood kahor soo qortay warbixin ku saabsan qorshaha Farmaajo. Macluumaadka Keydmedia Online ka heshay Madaxtooyadda waagaas, oo aan dooneyn in la magacdhabo, ayaa inoo sheegay in Kheyre iyo qaar kamid ah Wasiiradda Xukuumaddiisa hore lagu eedeenayo Musuq-maasuq iyo lacag laga dhunsaday qasnada bangiga dhexe ee Soomaaliya.
Xafiiska Hanti dhowrka ayaa daabacay dukumiinti ay ku caddahay lacago laga bixiyay khasnadda Dowladda islamarkaana xafiiska Ra'iisulwasaaraha lagu calaamadeeyay taas oo aan lahayn wax caddeyn ah (Waraaq Qaan-sheegad), tirada lacagta lagu tuhmayo inuu lunsaday musharax Madaxweyne Xasan Cali Khayre waxay gaareysaa $163,806.49 (Boqol lixdan iyo saddex kun, siddeed boqol iyo lix dollar iyo afartan iyo sagaal senti).
Xafiiska Hantidhowrka ayaa sidoo kale daabacy qeyb kamida lacago la sheegay in uu isticmaalay xafiiska Golaha Shacabka BJFS kaasoo isna sidoo kale aan lahayn wax caddeyn ah (Qaan-sheegad), tirada lacagta ku maqan Mursal iyo Muudey xafiiska ay maamulaan waxay gaareysaa $747,865.00 (Toddobo boqol afartan iyo toddobo kun, siddeed boqol iyo lixdan iyo shan dollar oo keliya). Xafiiska Golaha Shacabka ayaa shan jeer iyo ka badanba lunsaday lacagta lagu eedeeyay inuu lunsaday xafiiska RW Xasan Cali Khayre.
Musuqa lacagaha kuma koobna labadan xafiis oo kaliya, guud ahaan xafiisyada dowladda waxaa maalin walba ka dhaca falal la xiriira musuq-maasuq taasoo dhiirri-galineysa in uu kordho xajmiga Musuqa madaxda dowladda Soomaaliya.
Arintaan uu Farmaajo wado ayaa waxay u egtahay, Khaniin inta aysan ku khaniinin.